Ukugqitywa kweeNwele zoBuntu zaseIndiya / i-Mink Soie Hair Atlanta Ukugqitywa kweeNwele zoBuntu zaseIndiya / i-Mink Soie Hair Atlanta
Ukugqitywa kweeNwele zoBuntu zaseIndiya / i-Mink Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
Izinwele zethu ezinjenge-Indian / Mink ezintle ziphezulu kakhulu. Izinwele ziphethe imibala kakuhle kwaye zinokuphengulwa, zilubala, ziluhlaza, kwaye isitayela kaninzi ngaphandle kokulahlekelwa ukukhanya kwayo. Intloko yomntu ngamnye isuka kumnikeli omnye ukuqinisekisa ukuhambelana kwemveliso yethu.
yethu I-Indian Indian / Mink ukuvalwa kwentloko kwentloko yabantu are ezenziwe kuphela kwizinwele zobuntombi ezintle kakhulu. Ubunwele bethu be-Indian bude buhlala ixesha elide kwaye buya kugcina iminyaka eyi-2 okanye ngaphezulu ngenxa yamandla angenangqondo yezinwele zezinwele kunye ne-cuticles.